စက်ရုံ၏လေကြောင်းဘရိတ်အဆို့ရှင် China Manufacturer
ဖုန်မှုန့်ကောက်ခံရေး Rotary စတား Valve အားကုန်,မော်တော်တွေနဲ့ဖုန်မှုန့်ကောက်ခံရေး Rotary ကြှေးမှေး,ဘိလပ်မြေစက်ရုံ၏ Rotary Valve
Botou Hengrui Environmental Protection Equipment Co. Ltd. [Hebei,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား: Manufacturer အဓိကစျေးကွက်များ: Worldwide ထုတ်ကုန်: 61% - 70% ဖေါ်ပြချက်: ဖုန်မှုန့်ကောက်ခံရေး Rotary စတား Valve အားကုန်,မော်တော်တွေနဲ့ဖုန်မှုန့်ကောက်ခံရေး Rotary ကြှေးမှေး,ဘိလပ်မြေစက်ရုံ၏ Rotary Valve
Home > ထုတ်ကုန်များ > ဖုန်မှုန့်ကောက်ခံရေး Fittings > ကြယ်ပွင့်အမျိုးအစား Ash ကိုကယ်ဆယ်ရေး Valve > စက်ရုံ၏လေကြောင်းဘရိတ်အဆို့ရှင်
1. ကြယ်ပွင့် type ကို discharge ကိုအသုံးပြုသည်မီ, ချောဆီပမာဏနှင့်လျှော့ချအတွက်ဆီအမျိုးအစားကိုစစ်ဆေး, စစ်ဆင်ရေး၏တစ်လအကြာတွင်သစ်ကိုရေနံနေရာတွင်အစားထိုးနှင့်တစ်နှစ်တခါဆီကိုပြောင်းလဲပစ်။
2, လေထုအရင်းအမြစ် interface ကိုချိတ်ဆက်နှင့်အင်တာဖေ့စသည်စင်ကြယ်ခြင်းနှင့်ချောမွေ့ကြောင်းသေချာစေရန်အဖြစ်ဒါအင်တာဖေ့စ, နိုင်ငံခြားကိစ္စအားဖြင့်ပိတ်ဆို့ထားမှုရှိမရှိစစ်ဆေးပါ။
3. ကြယ်အမျိုးအစား discharge ကိုအသုံးပြုသည်မီ, ရဟတ်၏လှည်ဦးတည်ချက် (ထိုကွင်းဆက်ဘီးအိမ်ရာပေါ်တွင်မြှားနှင့်ကိုက်ညီသောလျှော့ချရဲ့ extension ကို၏ဝင်ရိုးမှမြင်,) လက်ယာရစ်ကြောင်းသေချာပါစေ။
4. ကြယ်ပွင့် type ကိုချသုံးပြီးမီ, sprocket shell ကိုကွင်းဆက်၏တင်းမာမှုစစျဆေးဖို့ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်စစ်ဆင်ရေးကာလအတွင်းမှန်မှန် check လုပ်ထားရပါမည်; တစ်ချိန်တည်းမှာ, အကွင်းဆက်များနှင့် sprocket သင့်လျော်သောအမဲဆီနှင့်အတူ coated နေကြသည်။
ရိနာစွဲ၏တပြင်လုံးကိုအသုံးပြုခြင်း, ဖိအားကယ်ဆယ်ရေးအဆို့ရှင်စဉ်အတွင်း 5. အဆို့ရှင်ခန္ဓာကိုယ် 0.05MPa အတွက်ပစ္စည်းပေါင်ချိန်ထက်တံဆိပျထဲမှာပစ္စည်းများ၏ဖိအားထိန်းညှိရပါမည်။ အဆိုပါဓာတ်ငွေ့ရေနံနှင့်ခြောက်သွေ့သောအဘယ်သူမျှမနဲ့ချုံ့လေကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။
တံဆိပ်ခတ်မှာဓာတ်ငွေ့အရင်းအမြစ်အမြဲတည်ရှိကြယ်ပွင့် type ကို discharge ၏တပြင်လုံးကိုအသုံးပြုခြင်း, စဉ်အတွင်း6။ ကိုသာအဆို့ရှင်ဝန်ဆောင်မှုထဲကကြောင်းကိုသေချာအောင်ပြီးနောက်, ဓာတ်ငွေ့အရင်းအမြစ်ပိတ်ပစ်နိုင်ပါတယ်။
ပထမဦးစွာကြယ်အမျိုးအစားချအများအားဖြင့် pneumatic output ကိုစနစ်အသုံးပြုသည်။ ဖိအား output ကိုစနစ်ကဒါမှမဟုတ်အနုတ်လက္ခဏာဖိအား output ကို system အတွက်, ကြယ်အမျိုးအစား discharge အဆိုပါနို့တိုက်ကျွေးရေးပြွန်ဖို့စဉ်ဆက်မပြတ်ပစ္စည်းထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည်။ အဆိုပါ pneumatic conveying ပုံမှန်အလုပ်လုပ်နိုင်အောင်အဆိုပါ pneumatic output ကိုပိုက်အတွင်းဓာတ်ငွေ့နှင့်အစိုင်အခဲကိုသေချာစေရန်အလို့ငှာ, ဓာတ်ငွေ့နှင့်အစိုင်အခဲ, တည်ငြိမ်ဖြစ်ကြသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, ရိနာစွဲ၏အထက်ပိုင်းနှင့်အောက်ပိုင်းအစိတ်အပိုင်းများ၏ဖိအားဓာတ်ငွေ့သော့ခတ်၏အခန်းကဏ္ဍကိုကစားရန်ကွဲကွာနိုင်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်, ကြယ်ပွင့် type ကို discharge pneumatic conveying စနစ်တွင်အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
နှစ်ယောက်တည်း။ အထက်ကျီတစ်ခုအတွက်ပစ္စည်းအလေးချိန်အားဖြင့်ကျဆင်းသွားသောအခါကဓါးသွားအကြားကွာဟမှုအတွက်ပြည့်စုံသည်နှင့်အဓါးသွား၏လည်ပတ်အတူအောက်ခြေမှာဆေးရုံကဆင်းသည်။ ထို့ကြောင့်, ကြယ်ကို discharge quantitative နှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်ဆေးရုံကဆင်းနိုင်ပါသည်။
သုံး, ကြယ်အမျိုးအစား discharge ယင်းဘင်ဒချ device ကိုအတိုင်းပစ္စည်းစုဆောင်းခြင်းစနစ်ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ကြယ်ပွင့် type ကိုချတရုတ်နိုင်ငံတွင်အများဆုံးအဆင့်မြင့်ချကိရိယာဖြစ်သည်။ ဒါဟာမကြာခဏမြေမှုန့်ကိုဖယ်ရှားမှုစနစ်အတွက်အရေးပါသောပစ္စည်းကိရိယာများအဖြစ်အသုံးပြုပါသည်။ ဒါဟာဖုန်မှုန့်, အသေးစားမှုန်ပစ္စည်းများအတွက်အထူးသဖြင့်သင့်လျော်သည် ဖြစ်. , ကောင်းစွာဒါအပေါ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, သတ္တုဗေဒ, ဓာတုစက်မှုလုပ်ငန်း, ဘောဇဉ်, ဘိလပ်မြေ, လမ်းအဆောက်အဦး, ခြောက်သွေ့ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်များ၏အင်ဂျင်နီယာစီမံကိန်းများဘို့ရွေးကောက်ဖြစ်ပါတယ်။
လေး။ ကပါးသောပစ္စည်း၏အပူချိန် 280 ဒီဂရီစီရောက်ရှိနိုင်ပါသည် ultrafine အမှုန့်နှင့်ဝံအကြားအဆက်အသွယ်ကိုတားဆီးနိုငျသောနှစ်ဦးစလုံးကြီးစွန်းမှာ bearing နှင့်လှုံ့ဆျောအကြားအချို့အထီးကျန်မှုတွေရှိပါသည်။ မြင့်မားတဲ့အပူချိန် discharge ၏အပူချိန်ပစ္စည်း 500 ဒီဂရီ C မှာရောက်ရှိနှင့်ကွင်းဆက်ဘီးအားဖြင့်ချိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်ပြောကြားခဲ့သည်။ အဆိုပါလျှော့ချနှင့် discharge ၏ shell ကိုအကြားအခြို့သောအကွာအဝေးရှိပါသည်။
ကြယ်ပွင့် type ကို discharge ၏ဖွဲ့စည်းပုံဒါအပေါ်ရဟတ်လှုံ့ဆျော, ခရုခွံ, တံဆိပျ, လျှော့ချ, မော်တာနှင့်ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်တယ်။ အဆိုပါကြယ်ပွင့် type ကိုချလည်းလမ်းခွဲ, သော့ခတ်အဆို့ရှင်, ကြယ်ပွင့်အမျိုးအစားကိုဖျက်ထုတ်အဆို့ရှင်, ကြယ်ပွင့် type ကိုလမ်းခွဲနှင့်လေတိုက်ထိန်းညှိလှည့်ဟုခေါ်တွင်သည်။
ကုန်ပစ္စည်းကဏ္ဍ : ဖုန်မှုန့်ကောက်ခံရေး Fittings > ကြယ်ပွင့်အမျိုးအစား Ash ကိုကယ်ဆယ်ရေး Valve
အဆို့ရှင်ကိုထိန်းညှိစတုရန်းလျှပ်စစ်စီးဆင်းမှု၏ flexibility အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
လေဟာနယ်သန့်စင်ဘို့ Air ကိုဘရိတ်အဆို့ရှင် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များစာရင်း: ဖုန်မှုန့်ကောက်ခံရေး Rotary စတား Valve အားကုန် , မော်တော်တွေနဲ့ဖုန်မှုန့်ကောက်ခံရေး Rotary ကြှေးမှေး , ဘိလပ်မြေစက်ရုံ၏ Rotary Valve , ဖုန်မှုန့်ကောက်ခံရေးပံ့ပိုးမှုကေ့ , ဖုန်မှုန့်ကောက်ခံရေးကေ့အရိုး , ဖုန်မှုန့်ကောက်ခံရေးကတော့ , ဖုန်မှုန့်ကောက်ခံရေးလေ့လာကြရအောင် , ဖုန်မှုန့်ကောက်ခံရေးသံမဏိ